गुण्डागर्दी गर्नेहरूका लागि लाग्यो यस्तो ठुलो झट्का, इन्चार्जकाे जिम्मेवारी सीअाइवी इन्स्पेक्ट एलिजालार्इ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > गुण्डागर्दी गर्नेहरूका लागि लाग्यो यस्तो ठुलो झट्का, इन्चार्जकाे जिम्मेवारी सीअाइवी इन्स्पेक्ट एलिजालार्इ!
गुण्डागर्दी गर्नेहरूका लागि लाग्यो यस्तो ठुलो झट्का, इन्चार्जकाे जिम्मेवारी सीअाइवी इन्स्पेक्ट एलिजालार्इ!
admin September 17, 2018 समाचार 0
काठमाण्डाै, ०१ असोज – नेपाल प्रहरीले दुई जना इन्सपेक्टरको सरुवा गरेको छ । काठमाण्डाैको कोटेश्वर र कांडाघारी प्रहरी प्रभागका असई र जवानलाई बालुवा ठेकेदारसँग घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले पक्राउ गरेपछि त्यसहाका ईन्चार्जलाई हटाइएको हो । प्रहरी मुख्यालयले कोटेश्वरका प्रमुख इन्स्पेक्टर राजु लामालाई महानगरीय प्रहरी पहरा गण सामाखुशीमा तानेको छ । लामाको ठाउँमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा कार्यरत इन्स्पेक्टर एलिजा गिरीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
इन्सपेक्टर गिरीको ईन्चार्जको रुपमा यो पहिलो पोस्टिङ हो । गिरीसंग महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौर, सोह्रखुट्टेमा काम गरिसकेको अनुभुव छ । उनि नेपाल प्रहरीमा व्यवसायीक अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् ।
अख्तियार शनिवार घूससहित पक्राउ महानगरीय प्रहरी प्रभाग कांडाघारीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) गोपाल श्रेष्ठ र महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीमा कार्यरत सुवास ढुङ्गाना प्रहरी हबल्दार दीपक भारती, उमेश यादव, अमन चौधरी र प्रहरी जवान रत्न रिजाल, मानसिंह रोका, दीपेन्द्र कुंवर र मुकेश पट्टेल छन् । उनीहरुले १ लाख घुस लिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
इन्सपेक्टर लामाका भान्से प्रहरी जवान पट्टेल घुस प्रकरणमा मुछिएपछि उनलाई सरुवा गरिएको हो । त्यसैगरी महानगरीय प्रहरी प्रभाग कांडाघारी इन्स्पेक्टर हरि ओझाको समेत सरुवा भएको छ । उनको ठांउमा इन्स्पेक्टर सुधीर राईले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
समाजवादी फोरमका नेता एवम् सांसद प्रदीप यादवले प्रधानमन्त्री ओली माथि लगाए यस्तो अारोप!
नालायक प्रहरी अफिसरहरूले संगठनकै बदनाम गरेपछि अाइजिपी खनालले दिए यस्तो निर्देशन…
सांसद सरिता गिरीले दिइन् ‘नबिर्सनुस् बंगलादेशको निर्माण कसरी भयो’ भन्दै यस्तो चेतावनी (भिडियो)
आँसु झार्दै रविले भने, ‘बाबाले मोबाइल चलाउन नजानेनि भोट माग्नु हुन्छ, कान्छी आमाले आमा बिर्साउछिन (भिडियो)
धादिङपछि फेरि चितवनमा बाहिरियो यस्तो खबर, भाई र श्रीमतिलाई बिस्वास गर्दा जे भयो… (भिडियो सहित)
जग्गा बेचेर फ’रार श्रीमान २ महिनापछि काँडाघारीबाट समातिए (भिडियो हेर्नुहोस्)
अनिता अत्याधिक रुन थालेपछि छोरी र श्रीमान बिनोदले यसरी मोबाइल देखाउदै फकाए (हेर्नुस् भिडियो)
के तपाईको जीवनमा साढे सातको शनि दशा छ? यस्तो गर्नुहोस् उपाय, तत्काल मिल्नेछ लाभ
खुसिको खबर: अब नेपालमा सुरुभयो ४५ वर्षबाट बृद्धभत्ता (सहि वा गलत?)
मंसिर १९ गते आइतबार, हेर्नुहाेस् यस्तो छ तपाईहरूको राशि अनुसारको भाग्यफल...
आज दिउसो करिब १ बजे तिर पृथ्वी ४ मिनेटका लागि अन्धकार हुने
मलेसियामा ३० जना नेपाली कामदारलाई एउटै कोठामा राखेको कम्पनीमा छापा, यस्तो भयो…